Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2016
Fifamoivoizana: Inona ny hetsika tokony atao?
2016-04-29 @ 18:06 in Andavanandro
Mimenomenona daholo ianareo tamin'ilay loza roa misesy tamin'ny ilany andrefan'ny tanànan'Antananarivo nitranga androany 29 avrily 2016 fa inona ny fepetra tokony raisin'ny tsirairay manoloana izany rehetra izany? Aza miandry ny hafa sy ny heverinao ho tompon'andraikitra hafa any fa izaho sy ianao aloha no tokony anontaniana amin'ny maha-olompirenena anao.
Vao nanoratra aho tamin'ny maraina ary dia io resaka gaboraraka io indrindra no noresahiko, ary heverin-dry zareo fa zavatra norma mihitsy ny zavatra ataon-dry zareo mato nilefitra ny fitondrana. Aza miandry izany fitondram-panjakana izany fa efa fahazarana eto an-tanàna ny mihenjana tapabolana dia tsy hita intsony ny tohiny avy eo fa very an-javony.
Rehefa namaky ireo fanehoan-kevitra isan-karazany aho dia hita ihany fa tena manao toetran-jiolahimboto mihitsy, hono, ny saofera sasantsasany. Gaga ihany koa ny betsaka fa mbola tanora kely daholo koa ny ankamaroan'ireo saoferan'ny fiara fitaterana. Mimenomenona ny maro fa tsy dia nahita fianarana ireo mitondra fiara sy mitondra ny hafa, hany ka tsy mahatsapa ny adidy mavesatra amin'ireo fitondrana olona ireo. Be ihany koa ireo saofera no misotrosotro satria mitondra mpitsangatsagana, hany ka miseho ho mafibe sy tsy manaiky gisitra daholo avy eo.
Fa talohan'ireo loza ireo iza no nahasahy niteny, tena nisy tokoa ny niteny fa voavaly boraingina, fa betsaka amin'ny mpandeha no tsy miteny manampy ny mpandeha nahasahy niteny voalohany rehefa mirimorimo ny mpamily. Fa raha miara-miteny sy mandrahona ny mpamily ny mpandeha rehetra mbola hizizotra ve ny mpamily? Efa manana porofo azo lazaina amin'ny mpamily ianareo mpandeha izao, efa nisy loza noho ny fandehanana mafy ve ny maraina dia mbola midrikina mandeha mafy ihany ianareo? Sa ianareo no tsy mety maty? Mety tsy ho faty ianareo fa izahay kosa matahotra na dia ny haratra aza satria vidin-dafo ny fahasalamana eto amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Aza miteny hoe tsy maka lagy amin'izany aho fa tokony haka lagy amin'ny toe-javatra tahaka izao mihitsy ny rehetra... indrindra fa manan-janaka ianao ka rehefa misy ny loza tahaka itony dia any amin'ny zanakao avy hatrany ny sainao voalohany. Dia mba eritrereto fa mba samy mieritreritra ny zanany avokoa isika rehetra izao.
Tokony hisy ny hetsika tsy mila alalana amin'ny toe-javatra tahaka izao saingy izay tian'ny lehibe ihany io. Tokony hisy ny hetsik'olompirenena fampahafantarana amin'ny saofera fa mitondra ain'olombelona izy ireo. Tokony hahay hiray hina ny olom-pirenena mandeha manao hetsika hita maso amin'ny tsy fankasitrahana izao toe-javatra izao hoe niara-nitokona ry zareo mpamily dia nahazo rariny tamin'ny fanafoanana ny CIR. Dia mba aseho azy ireo ihany koa fa mahay mivondrona ny mpandeha ka tsy tokony hanaikinaiky ny resaka hoe hatreo an'anona ihany fa tonga dia valiana hoe tsy izay no andraikitrareo nahazoanareo hampiasa io zotra io.
Adino: raha nanoratra aho tamin'ny maraina dia tsy voasoratro tao ny hoe tamin'ny fitokonana nataon'ny fiara fitaterana ny fandraisana andraikitra tokony nataon'ny bebasy dia ny nanolotra vonjimaika fiarabe hitaterana ny vahoaka ho any amin'ny asany na hodiana fa tsy nijery afomanga tsy akory no nandehanan'ireo taty an-drenivohitra fa nanao ny adidiny izay mipaka ihany any amin'ny firenena na dia fitadiavana aza no nataony.
Dia soratra fanindroany androany 29 avrily 2016 sahady izy ity.